Romina Ashrafi: Aabbaheed ayaa qudha ka jaray isaga oo sheegay dilka inuu yahay mid ay sharaf ku jirto - BBC News Somali
Romina Ashrafi: Aabbaheed ayaa qudha ka jaray isaga oo sheegay dilka inuu yahay mid ay sharaf ku jirto
Romina Ashrafi waxay marar badan booliska u sheegtay iney nafteeda u cabsaneyso haddii ay gurigooda ku laabato
Booliska dalka Iran ayaa xabsiga u taxaabay nin lagu eedeeyey inuu dilay gabadhiisa oo 14 jir ah, isaga oo dilka uu gabadhiisa u geystay ku sheegay 'dil sharafeed' cara aad u weyna ay ka dhalatay.
Warbaahinta maxalliga ee dalka Iran waxay sheegeen Romina Ashrafi oo u dhalatay dalka Iran ay ku nooleyd gobolka Gilan.
Waxayna Romina la baxsatay nin 35 jir oo saaxibkeed ah kaddib marki uu aabbaheed uu ka horyimid guurkooda.
Labadi qof waa Romina iyo saaxibkeede booliska ayaa soo qabtay kaddibna Romina gurigeeda ayaa lagu celiyey iyada oo sheegeysay iney nafteeda u cabsaneyso.
Habeennimadi Khamiisti la soo dhaafay waxaa gurigi ay hurudday ku soo weeraray aabbaheed oo dilay gabadhiisa Romina.
Warbaahinta Gilkhabar waxay sheegtay Romina inuu aabbaheed qudha uu ka jaray aabbihina uu qirtay inuu dilka gabadhiisa isagu geystay.
Arbacadii wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa dalka Iran waxay boggooda hore ay ku soo daabaceen warar la xiriira dilka Romina.
Waxayna wargeysyada cinwaan uga dhigeen 'sharciga ku guldarreystay inuu badbaadiyo haweenka iyo gabdhaha Iran'.
Haddaba, bogga Twiiter-ka oo looga ololeynayo dilka loo geystay Romina ee #Romina_Ashrafi ayaa 50,000 oo jeer in ka badan lagu wadaagay barta Twitter-ka.
Dadka ugu badan ee barta #Romina_Ashrafi fikirkooda ku reebayna waxay ahaayeen kuwa si weyn u cambaareynaya dilka loo geystay Romina iyo guud ahaan dabeecadaha bulshada ku nool dalka Iiraan ay hawenku ula dhaqmaan.
Shahindokht Molaverdi, oo horay u soo noqotay madaxweyne ku xigeenka arrimaha hawenka iyo qoyska oo haatanna ah xoghayaha hay'adda ilaalisa xuquuqda haweenka waxay qortay "Romnia ama waxay noqon doontaa gabadhi ugu horreysay ama tii ugu dambeysay oo 'dil sharafeed' loo geysto".
Waxayna intaa ku dartay dilalka iney sii soconayaan "inta ay jiraan shruucda jilicsan iyo dhaqannada adag ee ay bulsha weynta dalka Iran ku dhaqmaan".
Sharciga ciqaabta ee shareecada islaamiga ku saleysan ee Iran lagaga dhaqmo wuxuu kahfiifinayaa xukunka lagu qaado waalidiinta ama qoysaska dilka ama waxyeellada kale ubadkooda u geysta ama kula kaco 'dil sharafeed'.
Waa maxay 'dil sharafeed'?
Dil sharafeed waxaa dalka Iran looga yaqaanna haddii qof ka mid ah qoyska uu ku kaco fal sharafta qoyska wax u dhimaya inta ay qoyska intiisa kale ceeb soo gaari lahayd qofki falkaasi geystay oo la dilo.
Koox xuquuqda aadanaha u doodda waxay sheegeen dadka inta badan lagula kaca dilka noocaasi iney yihiin kuwa:
Diida guurka ay qoyska u dooreen
Waxyeellada ay ka soo gaarto kufsi ama tacaddi galmo
Guurka ka hor sameeya galma xaaraan ah,
Balse dilalka waxaa kale oo ay u dhacaan siyaaba kala duwan oo ay ka mid yihiin sida gabadha oo labbis diinta iyo dhaqanka dalka Iran ka baxsan soo xirata oo suuqa ku marto iwm.
Haddii aabba ku nool dalka Iran uu gabadhiisa dilo sharciga ciqaabta dalkaasi wuxuu ku muteysanayaa xabsi u dhaxeeya 3-10 sano, halka dilalka kale ee caadiga xukunkooda uu yahay dil ama in diya (mag) la kala qaato.
Inkasta oo ay jirin tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey "dil sharafeedyada" Iran ka dhaca, haddana xubno u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay sheegeen iney sanadki hore dilal badan oo noocaasi ah ay ka dhaceen dalka Iran, gaar ahaanna deegaannada miyiga ee ay qabaa'illadu ku xooggan yihiin.
'Sawirkii fashilay in anigoo yar la isoo xaday'
Shimbir Hindiya basaasnimo u qabatay oo Pakistan laga yeeshay
TOOS Booliska Nigeria oo xiray nin dadka u sheegay in Nebi Ciise uu u imaanayo